Xaflad loo sameeyey ardayda qalinjebisey ee Eskilstuna | Somaliska
Waxaa maalintii khamiista ee 16-ka bisha juun, 2011 ka dhacday magaalada Eskilstuna xaflad weyn oo loo sameeyey ardaydii ka qalinjebisey dugsiyada sare ee magaalada Eskilstuna.Waxaa kale oo iyana abaalmarin kala duwan halkaas lagu gudoonsiiyey arday kale oo siyaabo kala duwan guulo usoo hoyey.
Xaflada oo si heer sare ah loo soo agaasimey waxaa soo qaban qaabiyey ururka isku xirka dhalinyarada ( somaliska ungdomsnätverket i Eskilstuna). Ururkaas oo ah urur ka shaqeeya arimaha dhalinyarada iyo guud ahaan arimaha bulshada.
Sidee u dhacday xafladii?
Xaflada waxaa lagu qabtay hool weyn oo ku yaal xaafada Fröslunda, oo ah xaafad ay soomaalidu aad ugu badan yihiin . Xaafadaas waxaa ay ku taal dhinaca galbeed ee magaalada Eskilstuna. Saacadu kolkii ay ahayd afartii iyo barkii galabnimo ayaa dadku bilaabeen iney kusoo ururaan goobka loogu talo galay xaflada. Waxaa dadka halkaas si diiran ugu soo dhoweynaayey dhalinyarada ururka isku xirka dhalinyarada Eskilstuna. Dhalintaas oo ku lebisnaa dhar loogu talo galay oo lagu garto. Waxaa ay dadku si habsani ah u fariisanayeen gudaha hoolka weyn. Waxaa dadkii halkaa yimid ay isugu jireen dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed; sida Odayaasha, haweenka, dhalinyarada iyo dhalaanka yar-yarba.
Waxaa xaflada lagu casumey iney ka hadlaan, aqoonyahano, odayaal, hooyooyin, siyaasiyiin ,culima udiin iyo dhalinyaroba.
Waxaa ugu horeyn xaflada furay gudoomiyaha ururka dhalinyarada Abuukar jeylaani.Waxaa uu Gudoomiyuhu ka warbixiyey heerarkii kala duwanaa ee uu ururku soo maray iyo ujeedada laga leeyahay qabashada xafladaan oo kale.
“ Ujeedooyinka ururka waxaa ka mid ah in aan dhiiri gelino ardayda iyo qof kasta oo subcada magaca soomaaliyeed kor usoo qaada. Maanta farxad weyn ayey inoo tahay inaan soo dhoweyno arday soomaaliyeed oo qalinjebisey iyo weliba arday kale oo siyaabo kala duwan guulo usoo hoyey. Waa inaan dhamaanteen ku faraxnaa una hambalyeynaa ardayda qalinjebisey” ayuu hadalkiisa kusoo xiray gudoomiye Abuukor jeylaani.
Waxaa intaas ka dib hadalkii qaatay Maxamed C/qadini oo ururka u qaabilsan dhinaca iskuxirka. Maxamed waxaa uu aad u faahfaahiyey waxyaalaha uu ururku qabto iyo ujeedooyinka uu doonaayo inuu ururku gaaro mustabqalka dhow. Intaas ka dib waxaa makarafoonka lagu soo dhoweeyey shiikha magaalada Eskilstuna Sheekh C/raxmaan. Sheekha ayaa waxaa uu ugu horayn dadka xasuusiyey ka cabsashada alaah subxaanu watacaalaa.Waxaa hadaladii sheekha ka mid ahaa. “ waxaa muhiim ah alle ka cabsiga, waxaa muhiim ah inaan diinteena ku toosnaano, waxaa muhiim ah inaan dhaqankeena islaamiga ah aan ilaashano, waxaa muhiim ah inaan noqono tusaale fiican.Tacliin waxaa ugu horeysa tan diinta. Qofku kolka uu diintiisa wax ka yaqaan, waxaa u fudud inuu waxyaalaha kalena uu barto. Sheekhu waxaa uu aad ugu celceliyey in dhalinyaradu bartaan dhaqankooda islaamiga ah iyo diintooda. Waxaa kaloo uu xusay muhiimada ay aqoontu leedahay.Sheekhu waxaa gabdhaha kula dardaarmay iney xijaabka qaataan, maadaama uu arinkaas ilaahay ina faray. Sheekhu waxaa uu dadka ku adkeeyey iney isku xirnaadaan, dhaqankooda islaamiga ahna ay ilaashadaan.
Intaas ka dib waxaa hadalka lagu soo dhoweeyey Macalin C/risaq maxamed xuseen oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee Sweden ahna macalin wax ka dhiga mid ka mid ah dugsiyada magaalada Eskilstuna. Macalin c/risaq waxaa uu aad uga hadlay muhiimada ay tacliintu leedahay. Waxaa hadaladiisii ka mid ahaa:
– Diinteena suuban waxaa ay aad uga hadashaa muhiimada ay leedahay aqoontu. Meelo badan ayaana arinkaas looga hadlay. Dhaqanka soomaaliyeedna waxaa uu aad u taageeraa aqoonta iyo barashada cilmiga. Suugaanta soomaaliyeed ayaa aad uga hadasha muhiimada aqoonta, taas oo ay ereyadaani ka mid yihiin:
Aqoon La àani waa iftiin la àan; waa aqal iyo ileys la àan.
Wadamada horey u maray badankood waxaa uu horumarkoodu ku salaysan yahay aqoonta ay dadku leeyihiin. Raysul wasaarihii hore ee Sweden. Olof Palme ayaa mar uu tacliinta ka hadlaayey waxaa uu yiri “ Hantida ugu weyn ee aan haysanaa hadii aan nahay reer sweden waa aqoonta ay dadkeenu leeyihiin”
Macalin C/risaq waxaa uu hadalkiisa ku soo xiray ereyo suugaaneedyo ka hadlaaya xagga tacliinta oo ay ka mid ahaayeen:
Barashada cilmigu waa hanti aanan baaqan, nimco iyo barwaaqiyo, biyo weeye aan go ìn. Ee balanteenu waxay tahay baadigoob aqooneed.
Waxaa ka dib hadalkii qaatay suldaan Baaruud oo ka mid ah salaadiinta magaalada ahna macalin wax ka dhiga dugsiyada magaalada. Suldaan baaruud waxaa uu ku nuux-nuuxsaday muhiimada ay leedahay in dhalaanka ay helaan tarabiyad wanaagsan. Waxaa kaloo uu baaruud ka hadlay kaalinta waalidka laga doonaayo si ay ilmuhu horumar u gaaraan. Waxaa hadaladii Baaruud ka mid ahaa: – Waalidka waxaa laga doonayaa iney is kaashadaan oo ku dadaalaan iney ilmahooda horumar gaarsiiyaan. Waxaa la doonayaa in waalidku xiriir fiican la yeesho iskuulka iyo meelaha kale ee ilmuhu ay tagaan. Waxaa kaloo muhiim ah in dhaqanka wanaagsan ee islaamka aan dhalinyarada baro. Waa inaan wakhti gelinaa ilmaha, waa inaan dhiiri gelinaa, waa inaan garab istaagnaa, kolkaas ayaa ilmuhu niyad wanaagsan helayaa, uuna ku dadaali tacliinta. Ayuu yiri Suldaan Baaruud.
Waxaa kaloo hadalo dardaaran ah iyo muhiimada Afka soomaaliga halkaas kasoo jeediyey Abwaan Maxamed Xuseen Tabaarak. Waxaa uu abwaanku sheegay in barashada afka soomaaligu uu yahay muhiim. Waxaa uu yiri. War afku waa dhaqan, haddii uu kaa dhumuno ogow dhaqankaagii baa kaa lumay. Waa in ilmaha afka soomaaliga lagula dadaalaa ayuu yiri abwaanku. Waxaa kaloo uu waalidka kula dardaarmay iney dhaqankeena iyo kan iswiidhishkaba ay ka qaataan waxyaalaha fiican. Waxaa kaloo isna halkaas ka hadlay macalin faysal Ali uu isna adkeeyey muhiimada tacliinta. Kuna casuumey ardayda inuu
Maalmaha qaarkood ka saacidi doono waxyaalaha iskuulka looga soo diro. Taas oo aad loo soo dhoweeyey.Waxaa kaloo isna halkaas ka hadlay Abshir Osman oo ka mid ah siyaasiyiinta magaalada iyo weliba gobolka.Abshir waxaa kaloo macalin ka yahay magaalada faleen. Abshir waxaa uu xooga saaray in waalidku isku xiraadaan iskana kaashadaan arimaha ku saabsan dhalaanka iyo tacliintooda.
Waxaa kaloo goobta ka hadlay urur ay dhalinyarada aqoonyahanku leeyihiin oo xaruntiisu tahay magaalada caasimada ah ee Stockholm. Ururkaas oo la yiraa, S.A.V.E. Dhalinyaradii ururkaas mataleysey waxaa ay warbxin kooban ka bixiyeen ururka oo ay sheegeen in xubnihiisu yihiin aqoonyahano bartay cilmi kala duwan. Waxaa uu ururku dhalinyarada soomaaliyeed ee Sweden ku dhiiri geliyaa tacliinta. Waxaa kaloo uu dhalinta siiyaa talooyin iyo tusaalooyin ku saabsan xagga tacliinta. Waxaa kaloo uu ururku ururiyaa lacago uu ku taageero dadka taabaaleysan ee ku dhaqan soomaaliya. Ururka waxaa xafladaan uga soo qayb galay laba dhalinyaro ah oo kala bartay cilmiga dhaqaalaha iyo injineernimada. Waxa kaloo meesha ka hadlay hooyo ka mid ah hooyooyinka magaalada. Hooyadaas oo qiiro ka muuqato ayaa tiri. Maanta waa farxad inaan halka isugu imaano inagoo taageereyna kana farxineyna caruurteena. Waa inaan iskaashanaa oo aan meel kasoo wada jeensanaa ayey tiri hooyadaasi.
Intaas ka dib waxaa halkaas ruwaayad yar kasoo jeediyey dhalinyarada ururka isku xirka dhalinyarada. Ruwaayadaas oo ka hadleysey muhiimada tacliinta iyo dadaalka ay tacliintu u baahan tahay. Si wanaagsan ayey dhalintu u mataleen ruwaayadaas. Waxaana ay kasbadeen sacab aad u dheer.
Ugu damayntii waxaa ardayda la gudoonsiiyey shahaadooyin kala duwan oo abaal marin ah. Ugu horeyn waxaa shahaadooyinka la siiyey ardaydii dugsiyada sare ka qalinjebisey oo dhamaa ilaa 5 arday. Intaas ka dib waxaa shahaado sharaf la siiyey laba wiil oo ah marar badan ku guuleystey orodka gobolka iyo meelo kale oo badan. Labadaan wiil waa kuwo aad caan uga ah magaaladan Eskilstuna. Waxaa ay ordaan 100 m, 200m iyo 400m . Guulo aad u waaweyn ayey soo hoyeen. Waana laba wiil oo mustaqbal fiican ku leh xagga ciyaaraha orodada. Waxaa ay horay ugu guuleysteen abaalmarino badan oo kala duwan.
Waxaa kale oo shahaado la gudoonsiiyey arday sameeyey horumar xaga tacliinta ah oo ay yartahay qof sameyn kara. Ardaygaan waxaa uu iswiidhan yimid afar sano ka hor, weligiisna iskuul ma aanu dhigan. Wax walba halkaan ayuu ku bilaabay. Ardaygaasi waxaa uu ka mid ahaa ardaydii ka baxday fasalka sagaalaad ee u gudbey dugsiga sare. Ardaygaasi waxaa uu ku baasay 14 maado oo ka mid ah 17-ka maado ee iskuulka laga dhigto. Dugsiga ardaygu dhigto ayaa isna maalin hore siiyey abaalmarin loogu magac daray “ horumarkii ku dayashada mudnaa”.
Arinta ardaygaasi waxaa ay muujineysaa in dadaalka hadii ilaahay kula garabgalo uu miro dhaliyo. Tusaale ardaygaas baa kuugu filan, ee waa inaan ku dayanaa.
Intaas ka dib waxaa la soo gabagabeeyey xaafladii qalinjebinta. Waxaana ay ku dhamaatay guul iyo farxad.
Maansha allah. Reer Eskilstuna! waxaad qabateen howl ku dayasho mudan. dhiiri gelinta iyo sida aad u sharafteen ardaydeena waa mid aad u wanaagsan.
Waxaan aad ula yaabey wiilka wakhtiga yar Sweden joogey, weligiisna aan iskuul dhigan ee ku baasay intii badnayd maadooyinkii iskuulka. Bilad buu mudan yahay wiilkaasi. Waxaan jeclaan lahaa in wiilkaas yari la geeyo magaalooyin badan oo ay soomaalidu degan tahay si uu ardayda kale uga waramo waxa uu sameeyey.
Guul baan idiin rajeynayaa reer Eskilstuna. halkaas ka wada howsha
Waxaan akhristay qoraalkan oo ah mid aad u fiican. Waxaa ii soo baxay Eskilstuna iney joogaan, aqoonyahan, abwaano, salaadiin, arday, orodyahano, ururo dhalinyaro oo waxtar leh. Lycka till.
Khudbado aad u qiimo badan ayaa meesha laga soo jeediyey.
aad baa looga faaiideysan doonaa
Waxaan rajeynaa in magaalooyin badani idinku daydaan.
Xafladobadan oo qalinjebin ah baan ka qaybgalay, Hal mid bey reer Eskilstuna kaga duwan yihiin dhamaan xafladaha qalinjebinta. Reer Eskilstuna si balaaran bey wax u eegeen. Waxaa ay abaalmariyeen ardaydii qalin jebisey, kuwii dadaalka lama filaanka ah sameeyey iyo kuwii siyaabo kala duwan magaca soomaaliyeed kor ugu qaaday. Gaar ahaan rhalinyarada isboortiga ah. wiilasha orodyahanada ah wa in dhamaan bulshadu gacan qabataa.
waxaan aad ugu farxay xafladi qalin jabinti eskilstuna waa wax aad loogu farxo dhalin somaaliyeed ee gaartay guul intaa la eg waxaan oran lahaa dhalinta somaliyeed meel kasto oo ay joogaan waa in ay dadaa laan gacmahana is qabsadaan.ilike somali.thanks
waxan habalyo u diraaya dadaki so ababulay xalfadan iyo ardayda somaliay ee qalin jabiyey waxan u rajinayaa guul iyo farxad
wooooooooooooow waxaan hambalyo u dirayaa ciyar yahan ka faraha logu gubtay ee dada yar ee ku magac dheer ABDIASIS. keep up brooooor
sida aynu maqalnay waa ciyar yaan da yar ee ka qeeb qataa orododa sida 200, 400 iyo 100 meter, waxaana filayaa in uu ka muqan dono dunida hor martay dhawaan,
simon ali says:
mycket bra jobbat kära vänner
i framtiden ser det ljust ut
här i eskilstuna
yes vi kan -yes vi kan
vi kan göra skilnad
om vi organisera oss- bra jobbat ännu en gång
mvh simon ali dirie